भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा दाहाल र उपप्रमुखमा शाह विजयी
वसन्त पराजुली/शान्ता अधिकारी
भरतपुर, साउन २२ गते । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की उम्मेदवार रेणु दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ । शनिबार राति सकिएको मतगणनाअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेस गठबन्धनकी उम्मेदवार दाहाल नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई २०३ मतअन्तरले हराउँदै विजयी हुनुभएको हो ।
महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित दाहाल पहिलो महिला हुनुहुन्छ । देशभरिका छवटा महानगरपालिकामध्ये वीरगन्जमा निर्वाचन हुन बाँकी छ भने अन्य पाँच महानगरपालिकाको प्रमुखमा पुरुष उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ । दाहालले ४३ हजार १२७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ज्ञवालीले ४२ हजार ९२४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । राप्रपाका बद्री तिमिल्सिनाले छ हजार ८४२ मत पाउनुभएको छ ।
यस्तै उपप्रमुखमा काँग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनकै पार्वती शाह ठकुरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँ आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी दिव्या शर्मा आचार्यलाई भारी मत अन्तरले पराजित गर्दै उपप्रमुखमा विजयी हुनुभएको हो । उहाँले ४७ हजार १९७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने आचार्यले ३९ हजार ५२५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
प्रमुखमा निर्वाचित रेणु माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी माहिली छोरी हुनुहुन्छ । परिवारमा श्रीमान्, ससुरा, छोरी र छोरा रहेकी रेणुका श्रीमान् अर्जुन पाठक व्यापार गर्नुहुन्छ । २०३४ असार २२ मा जन्मनुभएकी रेणु ०४६ सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । माओवादी महिला सङ्गठनकी महासचिव हुनुभएकी रेणु अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले काठमाडाँै जिल्लामा बसेर पार्टीको कामसमेत गरिसक्नुभएको छ ।
समानुपातिक तर्फबाट २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा सदस्य बन्नुभएका दाहाल २०७० सालको निर्वाचनमा भने काठमाडौँ–१ बाट पराजित हुनुभएको थियो । नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्धको तयारी गर्दै गर्दा रेणु चितवनस्थित मामाघरमा बसेर कक्षा १० मा पढ्नुहुन्थ्यो । प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गर्नुभएकी रेणुले भारतमा बसेर अखिल नेपाल भारतीय सङ्गठनमा समेत काम गर्नुभएको छ ।
दाहाल विकट क्षेत्र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूमा बसेर द्वन्द्वकालमा पार्टी सङ्गठन गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । साविक शिवनगर हालको भरतपुर महानगरपालिका–१४ निवासी दाहाल २०५१ सालमा पार्टीमा प्रवेश गरी २०५२ सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा लाग्नुभएको थियो ।
निर्वाचित भएलगत्तै प्रमुख दाहालले गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्दै भरतपुरको विकास र समृद्धिमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । “केन्द्रीय स्रोत र साधनलाई यहाँको स्थानीय स्रोत र साधनसँग जोडेर मैले भरतपुरलाई एउटा नमुना शहर बनाउने जुन प्रण गरेको छु , त्यो पूरा गर्नेछु”, उहाँले थप्नुभयो, “भरतपुरलाई नमुना विकाससहितको वैकल्पिक राजधानी बनाउने मेरो लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्नेछु । ”
यस्तै उपप्रमुख शाह नेपाल महिला सङ्घ चितवनकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएकी शाह नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय महासचिवसमेत हुनुभयो । उहाँले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
“म एउटा दलबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएको छु, अब मैले अघि सारेको घोषणापत्रअनुसार विकासनिर्माणमा लाग्नेछु”, उहाँले भन्नुभयो । भरतपुरको आर्थिक समृद्धि नै आफ्नो लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भरतपुरमा पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ ३१ गते नै निर्वाचन भए पनि वडा नं. १९ मा ९० मत च्यातिएपछि यसको नतिजा आउन ढिला भएको हो । भरतपुर–१९ मा पुनः निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि शुक्रबार १९ नम्बर वडाको पुनः मतदान सम्पन्न भएसँगै भरतपुर महानगरपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएको छ ।
निर्वाचनअनुसार भरतपुर–१९ मा वडा अध्यक्षमा काँग्रेसका कर्णबहादुर गुरुङ र २० मा काँग्रेसकै मणिराम तामाङ प्यानलसहित निर्वाचित हुनुभएको छ । २९ वटा वडा रहेको भरतपुरमा १४ वटा वडा अध्यक्ष एमाले, १२ वटा वडा अध्यक्ष काँग्रेस र तीनवटा वडा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको छ । मेयर र उपमेयरमा विजय हात परेसँगै काँग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले महानगरपालिकामा स्पष्ट बहुमत हात पारेको छ ।
भरतपुुर महानगरपालिकामा रहेको एक लाख ५० हजार मतमा एक लाख १२ हजार ७१८ मत यो निर्वाचनमा खसेको थियो ।
उत्कृष्ट शहर बनाउँछु : दाहाल
भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
यो जितलाई मैले जिम्मेवारीका रूपमा लिएको छु । भरतपुर महानगरवासीले मलाई विश्वास गरेर पहिलो मेयर बनाउनुभएको छ । जनताले जुन ढङ्गको ममता मप्रति दर्शाउनुभयो, यो म कहिल्यै बिर्सनेछैन । यसलाई मैले भरतपुर महानगरवासीकै जितका रूपमा लिएको छु । यो विजयले भरतपुरलाई उत्कृष्ट शहर बनाउने आत्मविश्वास बढेको छ ।
चुनावका बेला दलगत प्रतिस्पर्धामा तपाईंहरूबीच तिक्तता भएका होलान् । प्रतिपक्षीलाई पनि कसरी सँगै लिएर जानुहुन्छ ?
हेर्नुस्, चुनावमा जित्ने एक जनाले हो । अब त्यसमा मलाई महानगरवासीले विश्वास गर्नुभयो । मैले अब मलाई मत दिने र नदिने भनेर छुट्याएर हेर्नेछैन । दलगत चुनावमा एउटा दल (माओवादी केन्द्र)बाट उम्मेदबार बनेँ, अर्को दल (काँग्रेस)ले मलाई समर्थन ग¥यो । अब म चुनाव जितेपछि सबै दलको भएँ ।
मसँगै चुनावमा सहभागी हुनुभएका देवीजीलगायत अन्य उमेदवारको पनि कुरा लिएर म महानगरको विकासमा अगाडि बढ्नेछु ।
भरतपुर महानगरपालिकाको विकासमा के के काम गर्नुहुन्छ ?
चितवन आफैँमा ७६औँ जिल्ला हो । यहाँको जनसमुदाय सचेत छ । सुन्दर नगरी भरतपुरको विकास र समृद्धिमा मेरो ध्यान केन्द्रित गर्नेछु । केन्द्रीय स्रोत र साधनसँग जोडेर मैले भरतपुरलाई एउटा नमुना शहर बनाउने जुन प्रण गरेको छु, त्यो पूरा गर्नेछु । भरतपुरलाई नमुना विकाससहित वैकल्पिक राजधानी बनाउनेछु । यस्तै भरतपुरलाई व्यवस्थित शहरीकरण गराउँदै महानगरमा मेट्रो रेल, भरतपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउनेछु ।
भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउँदै महानगरभित्र आफ्नै नगर अस्पताल बनाउने मेरो प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछु ।
पर्यटन विकासलाई टेवा पु¥याउन चितवन देखिने भ्यु टावर, आधुनिक मनोरञ्जन पार्क, हरेक वडामा बालबगैँचा र उद्यान निर्माणमा जोड दिनेछु ।
सार्वजनिक सडकहरू कालोपत्रे गरिनेछन् । महानगरपालिकामा भित्री र बाहिरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ । सडक, भौतिक पूर्वाधार महानगरको सापेक्षताअनुसार विकास गर्दै लगिनेछ ।
नारायणी र राप्तीको तटबन्ध गरी उकास भएको जमिन प्रयोगमा ल्याइनेछ । यो विकासनिर्माणमा मैले सम्पूर्ण भरतपुरवासीको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु ।
अन्त्यमा महानगरवासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम सम्पूर्ण नगरवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंहरूले मतदान गरेर हामीलाई जिताउनुभयो । त्यो मतलाई हामी खेर जान दिनेछैनौँ । महानगरको विकासमा नगरवासीसँगै मिलेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।